Dhalinyarada Somaaliyeed ee Bristol oo aan bulshada ka dhex muuqan, codkooduna qarsoonyahay – Bristol Somali Media Group
Somali Media Group March 26, 2016 April 10, 2016 BSMG posts, News, Youth
Abdi Mohamed – Warbixin maalintii Khamiistii (24 March 2016) laga soo saaray hawlgalkii Brooke, kaas oo 13 dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed lagu xidhay arrimo la xidhiidha faroxumayn hablo aan qaangaadh ahayn, ayaa si faahfaahsan u cadaysay in ciidanka amaanka (police), qolooyinka arrimaha qoyska iyo bulshada ka shaqeeya (social workers) iyo shaqaalaha caafimaadku ay ka soo bixi waayeen kaalintii looga baahnaa ee ahayd in ay hablaha yaryar ka badbaadiyaan dhibaatooyinka noocan ah. Laakiin warbixintu wax badan kamay odhan baahida loo qabo in la helo hab lagaga hortago fal-dambiyeedyada noocan ah ee dhalinyaradu ku kacdo.
Warbixintu waxay cadaysay, inkastoo dhamaan inamadii la xidhay ay Soomaali ahaayeen, in “aanay jirin wax cadaynaya in isirkooda iyo dhaqankoodu ay qayb ka ahaayeen wixii dhacay”. Waxa kale oo ay warbixintu cadaysay in “inamada la xidhay aanay ahayn kuwo isku duubnaa” oo dhacdadan si qorshaysan u fuliyay. Tani waxay ka soo horjeedaa wararkii sida aadka ah saxaafaddu u baahisay ee ahaa in ay ahaayeen koox abaabulan oo u soo tabaabushaystay in ay si qorsheysan dembiyada u fuliyaan.
Cinwaanadii wararka “budhcad Soomaaliyeed oo hablaha yaryar faraxumeeya” ayaa si aad ah u saameeyay bulshada Soomaaliyeed ee Bristol degan iyo magaalooyinka kale ee UK – iyo dunida inteeda kaleba. Saxaafadda ku hadasha afka Soomaaliga ayaa si aad ah arrintan u qaadaa dhigtay. Idaacadda BBC Somali ayaa iyadu weriye u soo dirtay Bristol, kaas oo goob joog ahaa maalintii maxkamaddu xukunka ridaysay; VOA Somali waxay toos telefoonka uga wareysatay qaar ka mid ah bulshada degan magaalada Bristol; Universal TV ayaa isaguna toddobaad kadib markii la xukumay 13ka wiil sii daayay barnaamij toos u baxayay oo ay ka qayb qaateen qareeno, macalimiin, dadka horumarinta bulshada ka shaqeeya iyo waalidiin kaleba; bogagga internetka Soomaalida ayaa iyana si aad ah u daabacay wararka la xidhiidhay xadhiga inamada; Soomaali badan ayaa iyaguna baraha bulshada (sida Facebook iyo Twitter) ku muujiyay qoraalo cadho badani ka muuqato oo ay aad ugu dhaliilayeen bulshada Soomaaliyeed ee Bristol ku nool, kuna eedeeyeen dhaqan xumo.
Sababta keentay xiisahaa gaarka ah iyo cadhadaasi waxay ahayd, iyadoo marka horeba dembiyada noocani ay yihiin kuwo aad u qadhaadh, dacwadan oo ahayd tii ugu horeysay ee nooceeda ah ee inamo Soomaaliyeed lagu qaado.
Siday doontaba ha ahaatee, dacwadani waxay maskaxiyan nabarro aan la dawayn karayn kaga tagtay dad badan oo bulshooyinka deegaanka ka mid ah – ayna ka mid yihiin dhibanayaaashii iyo waalidiintood, iyo waalidiintii dhalay inamada la xidhay.
Qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed oo aan waraystay markii ay dacwaddu socotay iyo markii ay dhamaatayba ayaa aad uga biyo diiday dhacdadan, waxayna isku dayayeen in ay fahmaan wixii dhacay iyo sidii ay u dhaceen – iyagoo ka eegaya dhinaca dhaqanka Soomaalida iyo diinteena suuban ee Islaamka. Su’aalahani waa kuwo aan weli laga jawaabin, waxayna ka mid yihiin waxyaabaha ay warbixntu ku guuldaraysatay in ay baadho.
Baadhitaankan la qaaday kadib markii ay maxkamaddu dhamaatay ee lagu eegayay hawlgalkan loogu magacdaray Brooke, gaar ahaan sidii ay hay’adaha caruurta la shaqeeyaa u maareeyeen dhacdadan iyo sida ay uga shaqeeyaan bedqabka caruurta, ayaan eegin khibrad nololeedkii iyo caqabadihii ka horyimid dhalinyaradan xukunku ku dhacay oo badankoodu ay ku dhasheen UK ama Yurub ama ay waddanka yimaaadeen iyagoo aad u da’yar oo la socda waalidiintood oo qaxooti ah.
Carruurta iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magalaada Bristol waxa hortaagan caqabado badan, kuwaasoo golaha deegaanka iyo hay’adaha adeegyada bixiya ayna weli waxba ka qaban. Arrimahaa waxa ka mid ah iyadoo aan la fahamsanayn baahidooda dhinaca xirfadaha xidhiidhka bulshada iyo maareeynta dareenka shakhsiga (social and emotional skills), iyo arrin kasta oo bulshada Soomaaliyeed codsato in wax laga qabto oo aan jawaab fiican laga bixin, lagana dabategin.
In ka badan 90% carruurta Soomaaliyeed waxa ay wax ka dhigtaan dugsiyo waxbarashadoodu ay aad u hoosayso, laguna yaqaan in aanay waalidiinta la shaqayn. Haddaba sidee baa looga filayaa dugsiyo markii horeba ay waxbarashadoodu hoosaysay oo ku guuldaraystay in ay bixiyaan adeegyo waxbarasho tayadoodu fiicantahay in ay ardayda ka caawiyaan sidii ay u heli lahaayeen xirfado ay ku maareeyaan xidhiidhka bulshada iyo dareenka shakhsiga (social and emotional skills)?
Maareyn la’aanta xirfadaha xidhiidhka bulshada iyo dareenka shaksiga ayaa doorweyn ka qaata fal dambiyeedyada ay guud ahaan dhalinyaradu ku kacaan – sida aan warbixinta ka fahmay.
Qaar ka mid ah dadkii baadhitaanka warbixinta laga soo qoray ka shaqaynayay ayaa waraystay labo ka mid ah inamadii la xidhay, kuwaas oo iskood u ogolaaday in ay baadhayaasha la kulmaan oo su’aalaha uga jawaabaan. Baadhayaashu waxay cadeeyeen in inamada mid ka mid ahi uu ka yimid qoys aqoon leh, halka ka kale uuu dhibaatooyin badan nolosha kala soo kulmay, haddana labadoodaba dembi isku mid ah ayaa loo xidhay.
Sababtu waxay tahay iyagoo aan la siinin fursado ay ku dhisaan xirfado ay ku maareeyaan xidhiidhka bulshada iyo dareenka shakhsiga ah; arrintani maaha mid iyaga u gooniya ee waa caqabad hortaagan carruurta iyo dhalinyarada wax ka dhigata dugsiyada badhtamaha magaalada ku yaala oo badankooda ay waxbarashadoodu aad u hoosayso.
Arrinta kale ee muddo dheer hortaagnayd dhalinyarada Soomaaliyeed, dhalinyarada ugu tirada badan ee madow ah ama ka soo jeedda bulshooyinka tirada yar ee magaalada degan, waa iyada oo golaha deegaanku aanu lahayn dhalinyaro ka shaqaysa arrimaha dhalinyarada oo Soomaali ah. Sidoo kale ma jiraan hay’ado Soomaali hoggaamiso oo dhaqaale ahaan bixin kara adeegyo haqab tira baahida caruurta iyo dhalinyarada.
Waxay ahayd arrin aan la iloobin karin sidii ay dhalinyarada Soomaaliyeed ee Bristol ku nool aanu codkoodu u muuqan markii ay saxaafaddu baahisay wararkii la xidhiidhay dacwadii Brooke.
Mar aan la kulmay inan ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ayaan aad uga amakaagay waxyaabihii uu ka hadlayay, waayo wuxuu faahfaahin ka bixiyay dhibaatooyinka hortaagan iyo sida ay u adagtahay in aad Bristol ku noolaato adigoo ah nin da’yar oo madow oo haddana Muslim ah. Sababtu maaha saxaafadda oo mar walba wax taban iyaga ka qorta, laakiin waxa ayna haysan cid u hadasha oo codkooda kor uqaada – xitaa xildhibaanadii golaha deegaanka ee ka mas’uulka ahaa xaafadaha Soomaalidu ku badantahay iyo dhamaan magaaladaba kamay hadlin dhacdadan iyo sida ay bulshada u saamayasay. Siday doontaba ha ahaatee, waxay u eegtahay in si sharci ahaan ah afka loo qabtay (gagged).
Arrinta kale ee aanay warbixintu soo hadal qaadin waa sida aanay u jirin adeegyo ku haboon dadka da’doodu ka yar tahay (ama tahay) 18 sannadood ee wax dembi ah lagu waayay ee maxkamadu sii daysay. Wakhtigan xaadirka ah dhalinyaradaasi waxay halis u yihiin in ay gacanta u galaan qollooyinka dembiyada qorshaysan faraha kula jira (criminal gangs) ama nimanka xag-jirka ah. Waa lama huraan in bulshada Soomaaliyeed ee Bristol ay arrintaa si dhakhso ah uga hadlaan oo wax uga qabtaan.
Marka lagu daro waxyaabaha ay warbixintu soo jeedisay iyo jawaabaha ay ka bixiyeen guddiga Bristol u qaabilsan badbaadinta carruurta (Bristol Safeguarding Children Board), in carruurta laga badbaadiyo waxyaabaha dhaawaca u leh waxay ku xidhantahay sida dawladda hoose iyo hay’adaha la shaqeeya ay arrimaha la horkeeno u xaliyaan, waxna uga qabtaan caqabadaha hortaagan dhamaan bulshooyinka kala duwan ee magaalada degan; dhamaan carruurta iyo dhalinyarada, waalidiinta iyo bulshada ay ka yimaadeen waa in ay xalka ka mid noqdaan – weliba aanay noqon mid warqad lagu qoro ama afka uun laga yidhaahdo, laakiin waa in la dhaqan geliyaa.
Tani waxay iyaga ka caawin doontaa in ay ka faa’iideystaan khibradda iyo aqoonta bulshooyinkan – mid dhaqan iyo diimeedba – iyo in la helo hab looga hortago fal-dambiyeedyada dhalinyaradu ku kacdo.
Follow us on Twitter: @smgbristol
Previous ‘Somali youth in Bristol left voiceless’
Next The only time I feel included is during the election campaign, says Somali voter – Bristol mayoral election 2016